Khadadka Magaalada Bosphorus ee Istanbul waxaa loo furi doonaa Gaadiidka Dadweynaha 24 Saac | | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKhadadka Magaalada Bosphorus ee Istanbul ayaa u furi doona Gaadiidka Dadweynaha 24 saac
27 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Khadadka Istanbul ee Bosphorus waxay furi doonaan saacadaha gaadiidka dadweynaha
Sinem Dedetaş, Maareeyaha Guud ee Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa sheegay in Khadadka Magaalada ay bixiyaan gaadiid gaaraya 42.5 milyan oo rakaab ah. Dedetaş waxay soo dirtay war wanaagsan oo sheegaya in Lines-yada loo yaqaan 'Bosphorus Lines' loo furi doono gaadiidka dadweynaha 153-ka saac maalintii, iyagoo leh waxay daneynayaan dhammaan talo soo jeedinta ALO 24.
Sinem Dedetaş, Maareeyaha Guud ee Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, wuxuu sharraxay inay sii wadayaan dadaalkooda ay ku gaarayaan himilada Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu si loo wanaajiyo khadkooda isla markaana loo kordhiyo saamiyada badda ee gaadiidka dadweynaha.
Dedetaş waxay xustay inay ka heleen dalabyo badan oo cusub rakaabkii adeegsanayay marinka badda. Annaga oo falanqaynayna baahiyahaas iyo faa'iidooyinka guud, waxaan si gaar ah u falanqaynay khadadka la furi karo iyo waxa lagu qaban karo gaadiidka badda. Sidaa darteed, waxaan isku diyaarineynaa safarka xagaaga, ayay tiri Dedetaş.
Is dhexgalka gadiidka waxaa looga baahan yahay in la kordhiyo saamiga badaha. Waxaan bilownay inaan ka shaqeyno qorsheynta waqtiyada duulista. Waxaan kor u qaadnaa geedi socodka dayactirka ee sarankeena maraakiibta. Waxaan dardargelinay hawsha dayactirka ee 200-sano jirka Fashion Ferry, oo ajandaha la yimid ajandayaasheedii, waxaana qorsheyneynaa inaan u adeegno rakaabkeenna bisha Maarso. Iyada oo la raacayo '' Istanbul is Yours '', waxaan qabanqaabinnay shirweyne gaadiid socon kara iyo aqoon isweydaarsi badeed oo ay soo qaban qaabisay degmaheena. Waxaan ku qabanay Aqoon-isweydaarsiga Badda badda ku taal Haliç. Qorshaynta gaadiidka, dhaqanka badda iyo Kanal Istanbul ayaa ahaa sedex mowduuc oo looga wada hadlay aqoon isweydaarsiga. Waxaan ku soo ururinay aqoon isweydaarsiga qunyar-socod. Waxaan bilownay abuurista wax soo saar, waxaan heysan doonnaa muddo labo bilood gudahood ah. ”
621 TALEEFINTA MAALINTA
Isagoo raacinaya ereyada wadooyinka Magaalada waxay bixiyaan 21 socdaal maalin kasta 700 shaqaalaha 621 khad, Dedetaş waxay xustay in aqoon isweydaarsiyada iyo kulamada ay muujinayaan inay jirto dhibaato is dhexgalka gaadiidka. Dedetaş wuxuu yidhi soo socda ku saabsan mawduuca:
Waxaan bilownay inaan iskaashi la sameyno goobo waxbarasho iyo kooxo shaqo. Maaddaama Khadadka Magaalada iyo daneeyayaasha kale ee badda, waxaan ku dadaalnaa inaan si tayo leh u isticmaalno badda. Waxaan u maleynaynaa inaan ka gudbi doonno dhibaatadan anagoo sameynayna nidaam ku habboon basaska bixiya gaadiid raaca metrooga iyo metrooga. Hadafkayagu, sida Duqa Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu uu sheegay, waa inaan qabno boqolkiiba 10 saamiyada gaadiidka badda. Marka loo eego xogta aan hayno, 2019 boqolkiiba koror ayaa la arkay 2018 marka loo eego 5. Haddaan eegno xilliga xagaaga, celcelis ahaan waa 11 boqolkiiba, taasoo ka sarreysa celcelis ahaan. ”
24 SAACADO GAADIID AH OO KU SAABSAN ISLAAMKA IYO DHAQANKA
Isagoo sheegay in aqoon isweydaarsi la abaabulay ka dib imaatinka maamulka Jasiiradaha, Agaasinka Gaadiidka Dadweynaha ayaa abaabulay oo markii uu soo gabagaboobay furitaanka aqoon isweydaarsiga, Dedetaş wuxuu siiyay war wanaagsan oo ah in shaqooyinka ay ka bilaabeen Lines Bosphorus Laankan. Isagoo tilmaamay inay ka sugayaan go’aan ka soo baxa golaha, ayuu Dedetaş yidhi, "Go'aanka ka dib, waxaan ka hirgalin doonnaa nidaam 24-saac dhinacyada Bosphorus ah." In kasta oo Dedetaş ay sharraxday in mid kasto oo loo soo bandhigo ALO ​​24 (Jadwal Cad) mid mid loo baaro, “Waxaan sidoo kale ku heli karnaa codsiyada qaab qoraal ah. Wadooyinka Magaalada waxaa la siiyay fursado gaadiid 153 milyan 2019 oo rakaab ah sanadka 42. In kasta oo tiradan guud ahaan ay wanaagsan tahay oo ku saleysan sanadihii la soo dhaafay, waa in ay waxyar ka badato. ”
Dedetaş wuxuu sheegay inay ka fakarayaan inay gawaarida korantada ku tuuraan bada wuxuuna sheegay in looga tagay tusaalayaashii dibada. Dedetaş wuxuu sharraxaaddiisa dhammaystiray sida soo socota:
Waxaan sidoo kale mashruuca ku bilownay warqad iyo suurta galnimada daraasada mashruuca. Mawduuca Doonta korantada ayaa ah mid ka mid ah arrimaha ay Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyaddu sidoo kale adkeynayso. Wuxuu kaashaday isku xirka wadooyinka Magaalada ee mashaariicda Wasaaradda. Doomaha korantada waxay saameyn wanaagsan ku yeelan doonaan dhaqaalaheena iyo deegaanka maadaama aysan jirin kharash shidaal ah. ”
15 waxay shaqeyn doontaa Isniinta Isniin, Khadadka Cusub ee Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha ee Istanbul
3. Goorma ayaa la furi doonaa buundada Bosphorus
Lines Istanbul Bosphorus Lines